တရုတ် စပါး ခြွေလှေ့ ထုတ်လုပ်သူများ နှင့် ရောင်းချသူများ |Chens-တင်ပေးလိုက်
ဂျုံ၊ ဆန်၊ ဆန်စပါး၊ ပြောင်းဆန်နှင့် ပဲများကို ခြွေလှေ့ရန် အဓိကအသုံးပြုသည်။ဂျုံ၊ ဖွဲနု၊ ဂျုံကောက်ရိုးနှင့် ဂျုံပိုလျှံ ဟူ၍ လေးမျိုးခွဲ၍ ကျွေးနိုင်သည်။၎င်းတွင် ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဘေးကင်းမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လည်ပတ်မှုအဆင်ပြေစေမည့် အားသာချက်များရှိသည်။
1. ခြွေလှေ့စက်၏ တင်းကျပ်သော အလုပ်နှင့် ကြမ်းတမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် စပါးရိတ်သိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်သည့် ဝန်ထမ်းများအား လုံခြုံသော လည်ပတ်မှုတွင် ပညာပေး သင်ကြားရမည်ဖြစ်ပြီး၊ တင်းကျပ်သော အင်္ကျီလက်များ၊ မျက်နှာဖုံးများနှင့် အကာအကွယ်မျက်မှန်များ စသည်တို့ကဲ့သို့ လည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် ဘေးကင်းရေး ဘုံသဘောကို နားလည်စေရန်၊ .
2. ခြွေလှေ့စက်ကို အသုံးမပြုမီ၊ လှည့်ခြင်းနှင့် လွှဲနေသော အစိတ်အပိုင်းများသည် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး တိုက်မိခြင်းကင်းခြင်းရှိမရှိ ဂရုတစိုက်စစ်ဆေးပါ။ချိန်ညှိမှု ယန္တရားသည် ပုံမှန်ဟုတ်မဟုတ်၊ ဘေးကင်းရေး အဆောက်အဦများ ပြည့်စုံပြီး ထိရောက်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။စက်ထဲတွင် အပျက်အစီးများ မရှိစေရန် သေချာစေပြီး ချောဆီ အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို ချောဆီဖြင့် ဖြည့်ထားသင့်သည်။
ခြွေလှေ့သည် ဆိုင်ကလုန်းစပါးခြွေလှေ့စက်ဖြစ်သည်။ခြွေလှေ့စက်တွင် လေဆင်နှာမောင်း အမျိုးအစား ဆိုင်ကလုန်း နိယာမကို အသုံးပြုထားပြီး ဆိုင်ကလုန်း ခြွေလှေ့စက် နှင့် ဆိုင်ကလုန်း ခွဲထုတ်သည့် ကိရိယာ ပါ၀င်သည်- ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဆွဲဆောင်မှုအား ကောက်နှံများကို ကျွေးမွေးရန် အသုံးပြုသည်။ ခြွေလှေ့ဆလင်ထဲသို့ ပါးစပ်ကို စုပ်ယူ၍ ခြွေလှေ့ခြင်းကို အောက်ခြေတွင် နားလည်သဘောပေါက်ပါသည်။ swirling flow ၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ ထို့နောက် ခွဲထွက်ခြင်းနှင့် output အတွက် swirling separation device သို့ ပေးပို့သည်။
မရှိ ကုသိုလ်ကံ ကန့်သတ်ချက်များ မှတ်ချက်
1 အတိုင်းအတာ(စင်တီမီတာ) ၁၁၈*၈၀*၉၅ စံစက်
2 ရဟတ်အရှည်(စင်တီမီတာ) 70 အလုပ်လုပ်အရှည်
3 ရဟတ်အချင်း (စင်တီမီတာ) 23
3 Spindle speedr/min ၉၀၀
4 ခြွေလှေ့ရဟတ်ဖွဲ့စည်းပုံ Spike သွားအမျိုးအစား (ပြောင်းဖူး၊ ပြောင်းဆန်၊ ပဲ) + တူအမျိုးအစား (ပြောင်းဖူး) ဆူး ၂၂ ချောင်း/တူ ၄၀
5 ဖွဲ့စည်းပုံအမျိုးအစား ကွဲပြားသော အပေါက်ပေါက်များဖြင့် ဆန်ခါပြားများကို ဖောက်ခြင်း။ φစပါး ၁၆ စေ့၊φပဲ ၁၀ မျိုး၊φဂျုံ၊ ပြောင်းဆန်၊ ပြောင်းဆန် ၅
6 ပါဝါ KW 2520v/2.2-3kw၊2800r/မိနစ် သို့မဟုတ် 6-8Hp ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့် ဓာတ်ဆီအင်ဂျင်
7 အလေးချိန် 70-120kg စံစက်
8 တြိဂံခါးပတ် A1180*2 ကွက်
9 တြိဂံခါးပတ် A1200*1လုံး
10 ကုန်ထုတ်စွမ်းအား 1000-2000kg/h
11 သင့်လျော်သောစပါးမျိုး ပြောင်း၊ပြောင်း၊ပြောင်း၊ပြောင်း၊ကြက်ဆူ၊ပဲ.....
နောက်တစ်ခု: peeling and rotating roller
ပြောင်းခြွေလှေ့စက်စျေးနှုန်း၊ ပြောင်းဖူးခွံအသေးစားစက်၊ ပြောင်းအခွံနွှာပြီး ခြွေလှေ့စက်၊ ပြောင်းဖူးခွံရောင်းရန်၊ ပြောင်းဖူးခွံစက်၊ ပြောင်းဖူးခွံစျေးနှုန်း၊